Waa Maxay Xayeysiinta Muujinta Tooska ah ee Barnaamijku? | Martech Zone
Axad, Oktoobar 18, 2015 Jimco, Diisambar 1, 2017 Douglas Karr
Waan wadaagnay maxaa barnaamij xayeysiis waa oo la wareystay maareeyaha suuqgeynta badeecada sare ee Adobe ee Xalalka Xayeysiinta, Pete Kluge. Waana sharaxnay iibinta waqtiga-dhabta ah, habka loo isticmaalo nidaamyada barnaamijyada si loogu helo boos bannaan adoo adeegsanaya shabakadaha xayeysiinta.
Tirinta xayeysiinta kaliya lagama heli karo shabakadaha xayeysiinta, in kastoo. Waxa kale oo jira dhowr madal oo xayeysiiyayaashu si toos ah uga iibsan karaan xayeysiiska bartayada. Farqiga ugu weyn ee udhaxeeya barxadayada xayeysiinta iyo shabakada xayeysiiska ayaa ah in aanaan haysan muuqaal qandaraas-waqtiga-dhabta ah oo nidaamyadu ay uga gorgortami karaan kharashka guji kasta. Taabadalkeed, waxaan lahaan lahayn sicir cayiman oo macaamilku isna kula heshiin doono.
Taasi micneheedu waa maxay? Hagaag, xogta ka soo baxday xogtan ka socota AdReady waxay muujineysaa in waqtiga dhabta ah ee xaraashka ay keeneyso qiimo 76% ka hooseeya. Si kastaba ha noqotee, taasi macnaheedu maahan inay tahay fursad fiican. Xayeysiinta soo bandhigida tooska ah waxay sifiican u horseedi kartaa sicirrada sarrifka sareeya ee meeleynta lacagta - ugu dambeyntiina waxay bixisaa olole guuleysta.
Xogta soo socota ee soo socota ayaa kugu dhex socon doonta sida aad uga faa'iideysan karto nidaamkaaga xayeysiinta barnaamijka iyadoo la adeegsanayo waqtiga-qandaraaska si loo wanaajiyo xayeysiintaada tooska ah ee barnaamijka.
Tags: barnaamij xayeysiisDiritaanka BarnaamijkaXayeysiinta Tooska ah ee BarnaamijkaMuujinta Tooska ah ee BarnaamijkaXayeysiinta Muujinta Tooska ah ee Barnaamijka
Tapglue: Qalabka Lahabeyn Karo Si Loogu Wareejiyo Badeecadaada Shabakad Bulsho.